Kedu ụzọ kachasị mma ị ga-esi rụọ ọrụ backlinks dị ike maka ebe nrụọrụ weebụ m?
Usoro njikọ nke njikọ kwesịrị ekwesị na ụzọ ziri ezi maka ịnweta ezigbo backlinks ga-enye mgbe nile uru dị na okporo weebụ ma nwee ọganihu ọnọdụ dị mma na ndepụta nke SERPs. Tupu anyị elee anya site na ndepụta nke ugbu a usoro na omume kachasị mma iji nye ụfọdụ backlinks dị ike na ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog, ka m malite na ahụmahụ m. Ekwadoro m ilele ụzọ ole na ole iji zere mgbe ị na-agba ọsọ maka ụlọ ọrụ kwesịrị ekwesị maka SEO.
E kwuwerị, e nwere ọtụtụ ụzọ dị mma ị ga-esi wuo njikọ backlink dị ike. N'otu oge ahụ, enwerekwa ọtụtụ ụzọ na-ezighị ezi nke nwere ike ịbịaru Google nhụjuanya dị ukwuu, na nchịkọta weebụ gị na-abụkarị usoro siri ike. Ọzọkwa, mgbe a bịara n'ihe dị oke nfe, usoro ahụ nwere ike ịghọ kpam kpam kpam kpam - ladies navy. Iji gbochie ọnọdụ ọjọọ dị otú ahụ, nke a bụ ihe a ga-ezere na-efu:
ịzụrụ na ire arụmọrụ na backlinks;
itinye maka ụlọ ọrụ njikọ njikọta ọ bụla;
mgbanwe ukwu na njikọ;
na - emekọrịta ihe netwọk;
ịmepụta backlinks na-adịghị mkpa na ime ka ha dị ndụ;
na-eji nnukwu ihe eme ihe, karia njikọ dị elu;
na-eme ihe iji jikọta ugbo ma ọ bụ backlink nke na-emepụta ibe weebụ.
N'ezie, iji atụmatụ ndị a nwere ike ịnye gị mmetụ ọganihu dị mkpirikpi ma dị mkpirikpi. Ka o sina dị, ha nile ga-ejide ma jide gị na Google, n'oge na-adịghị anya. Cheta na ebe nrụọrụ weebụ na ngalaba dị ala anaghị abụ ụzọ ị ga-esi gaa maka nkwado ọ bụla dị ike na ọganihu na-adịte aka na ọkwa dị elu. Ọ bụ ya mere ị ga-eji tụlee na Google na-eme ihe kachasị mma iji chọta nanị njikọ mma, m ga-egosi gị ọtụtụ usoro na omume m chọpụtara na ọ kacha dị mma maka oge ahụ. Site n'ụzọ, M nwalere ha niile na weebụsaịtị m azụmahịa. Nke a bụ otu ị ga - esi nweta ụgwọ azụ azụ dị ike maka nsonaazụ SEO kasị mma:
1. Njikọ dị n'ime nsonaazụ nchekwa zuru ezu nke ebe nrụọrụ weebụ na-eleghara ọtụtụ ndị anya. N'ezie, njikọ dị n'ime ya na-abịa site n'otu ibe na ibe - naanị n'ime otu weebụsaịtị. Ma, rịba ama na ọ bụrụ na emee ihe ziri ezi ma tinye ya na isiokwu dị ogologo, ị nwere ike ị nweta uru ndị a:
nke ikike weebụ dum;
nha nkesa ihe ntanye;
ọnụego ụba ọnụ ala n'ime ụlọ ọrụ ahụ dum;
okporo ụzọ dị mma na ikpughe nke ọdịnaya akwụkwọ ochie gị;
ntanetị nwere ike inye aka na ọkwa dị elu.
2. Ihe odide azụmahịa obodo bụ ohere dị mma maka ị nweta nkwado azụ azụ dị ike na ebe nrụọrụ weebụ azụmahịa gị. Gbaa mbọ hụ na ịchọta ọnọdụ ọchụchọ mpaghara gị ma wusie ikike ikike weebụ gị n'otu oge ahụ. Ihe niile ị chọrọ ebe a bụ ịme otu NAP njirimara niile maka njikọ njikọ gị na isi engines ọchụchọ dị ka Google, Yahoo, na Bing.
3. Ighagharia akwukwo ozo gi n'ime ihe kariri ihe, dika infographics, bu kwa uzo di iche iche iji wuo ihe nkwado di iche iche di na ebe nrụọrụ weebụ gi ma obu blog. Ọzọkwa, ọ ga-abụ atụmatụ nke okike ma dị jụụ iji meziwanye ọhaneze gị n'otu oge ahụ. Tupu ịmalite inweta nsụgharị backlinks dị elu, jide n'aka na ihe ọmụma gị dịka ihe doro anya, dị mfe ma dị mkpa nye ndị na-ege gị ntị dị ka o kwere mee. Ọzọkwa, gbalịa ịnọgide na-agba ọsọ ngwa ngwa na nkezi ha ruru 2000 pixels. Nọgide na-enweghị ihe karịrị atọ na agba na karịa nke 2 fonts. Echefukwala ịmepụta akụkọ na-akpali akpali nke ga-eme ka ọchịchọ onye ọrụ ruo ọgwụgwụ. Ozugbo a na - eme ihe kachasị mma gị, nyefee ha na ebe nrụọrụ weebụ a raara nye ọhụrụ - jiri iwu dị iche iche na Google, dịka "ozi gbasara ozi," "inurl / intitle: submit infographic," "allintext: submit infographic," etc.